YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, March 22
စစ်သား တွေ ကို အောက် ထစ် ၊ လစာ နှုန်း ၁ သိန်း ခွဲ ၂ သိန်း
ဒီတပါတ် ဓါတ်ဆီဈေး တွေ တက် လိုက်တာ ဗျာ ၊ သင်္ကြန်နား နီးတာလဲ ပါ ပါ တယ်။
အခု ဆို တပုလင်းဈေး ၁၅ဝဝ နဲ့ လက်လီ တဂါလံ ၆ဝဝဝ နား နီး ပြီ ပေါ့ ဗျာ။
ကဘာ့ဈေး က လဲ တက် ပါတယ် ၊ ရေနံစိမ်း တစည် ကို ၁၁၅ ဒေါ်လာလောက် ပေါက်
ပါတယ် ၊ တခြား ကဘာ့ နိုင်ငံ ၊ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ တွေ မှာ လဲ ဓါတ်ဆီဈေး တက် ပါတယ်
တဂါလံ လေးဒေါ်လာဝန်းကျင် ဆိုတော့ အခု ငွေမာဈေး နဲ့ ဆို ၃၆ဝဝ မကျော်သင့်ဘူး ပေါ့ဗျာ
မြန်မာပြည် က ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် သူ များ ထက် သဲ ပါ တယ် ၊ သူ များ နိုင် ငံ ဈေး တက် တာ
ထက် ပို ပါ တယ် ၊ အခု ဓါတ်ဆီ ရောင်းတာ ပုတ်ဂလိက က လုပ် နေ တယ် ဆို လဲ
ဓါတ်ဆီ ဈေး ကို တခြား နိုင် ငံ အများ နည်းတူဈေး ၊ နဲ့ ကြိုက် သလောက် ဝယ် လို့ ရ
အောင် စီစဉ် ပေး သင့် ပါ တယ်။
ဆိုင် ထုတ်ဈေး က ၂၅ဝဝ ဘဲ ဆိုတော့ တန်းစီ တိုးစား လူတန်းစားတွေ များ လာ ပါ တယ် ၊
ဆိုင်ကယ် ရှိ တဲ့ သူ က လဲ ဆိုင် ကယ် နဲ့ တန်းစီ ၊ ကား ရှိ တဲ့ သူ က လဲ ကား နဲ့ တန်း စီ
၊ မြတ်တယ် ဆို ပီး တန်း စီ တိုးစား တာ လုပ်ငန်း ကြီး တခု လို ဖြစ် လာ ပါ တယ်။
ဒါတွေ က အစိုးရ က လဲ ဝင်ငွေ မရ ၊ အကြံအဖန် လုပ် ရောင်း တဲ့ ဓါတ်ဆီဆိုင် တွေ နဲ့
အဆင့်ဆင့် တန်း စီ တိုး ရောင်း တဲ့ လူ တွေ အကြား ၊ မလို အပ် ဘဲ ဈေး ဆုံး ရှုံး မှု ဖြစ်
စေ ပါတယ်။ လူ တွေ လဲ အလကား နေရင်း အကျင့် ပျက် ကုန် စေ ပါ တယ်။
အစိုးရ ကားတွေ က တော့ တန်းစီ ဘို့ မလို ပါဘူး ၊ သူ တို့ ရ တဲ့ တလ ခွဲတမ်း ကို
တခါ ထဲ ကား ဖင်ထိုးပြီး ထည့် ယုံ ပါ ဘဲ ၊ ဓါတ်ဆီ ဈေးတက် တာ ကို ဝမ်း အသာဆုံး က
အစိုးရ အရာရှိတွေ ပါ။ အခု ဝန်ထမ်း ထဲ မှာ ရာထူး အကြီးဆုံး ညွှန်ချုပ် က ၂ သိန်း နီးပါး
လစာ ရ ပါ တယ် ၊ ထုံးစံ ဆိုရင် ညွှန်ချုပ် က ကား ၃ စီး ရ ပါ တယ် ၊ ရုံး ကား ၂ စီး
အိမ်ကား တ စီး ပါ ၊ သူ တို့ ရ တဲ့ ဆီ ကို သူတို့ မိန်းမ တွေ က ကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ပြီး
မလေ မလွင့် ရ အောင် ၊ ကိုယ်တိုင် ရောင်း ကြ ပါ တယ်။
ရုံး ကိတ်စ ကားသုံး ရင် ၊ သူ တို့ ခွဲတမ်း က မသုံး ပါဘူး ၊ ရုံး မှာ ရှိ တဲ့ ဆီ ထဲ က နေ
ဂျူတီ စလစ် ထပ် ရေးပြီး သုံး ပါ တယ် ၊ သူ တို့ ရ တဲ့ ဆီ က သပိတ်ဝင် အိတ်ဝင်ပါ။
တစီး ကို တလ ၊ အနဲလေး ဂါလံ ၆ဝ ရ ကြ တော့ ၊ အခု ဆီဈေး နဲ့ တစီး ကို ၃ သိန်းခွဲ
ဘယ်ရော့ လိမ့် မလဲ ဗျာ ၊ ၃ စီး ဆို တော့ ၊ ဓါတ်ဆီ ရောင်း စား တာ က တင်
တလ ကို ဆယ် သိန်း အထက် ရှိ နေ ပါ ပြီ။ ဒါ က ငါးပါး သီလ လုံခြုံ တဲ့ ညွှန်ချုပ် က
ရ နေ တာပါ ၊ ငတက်ပြား မျက်နှာဖုန်း နဲ့ ညွှန်ချုပ် ဆို အတိုင်း အဆ ၊ မမှန်း နိုင် ပါ ဗျာ။
ပြီး ခဲ့ တဲ့ ရက်ပိုင်း တွေ က လစာ တိုး တဲ့ ကောလဟလ ထွက် လာ တာ ၊ လူတွေ အတော်
ခံစား ရ ပါ တယ် ၊ ကိုယ့် ရှိ တဲ့ ပိုက်ဆံ လေး ဆုံး မသွားအောင် ၊ ရွှေ ပြေး ဝယ် ရ ၊
ငွေမာပြေး ဝယ် ရ နဲ့ လူ တွေ မှာ အလုပ် ပို လိုက် ရ တာ ၊ အခု တော့ ၊ လွှတ်တော် ထဲ
လစာ တိုး မလို ၊ မတိုး ဘူး လို လို နဲ့ ၊ ဗမာ စကား ကို ဗမာတွေ ဘာမှန်း နား မလည်
အောင် မေး သံ ဖြေ သံ ၊ မရေ မရာ သံ တွေ ကြား ရ တော့ ၊ ရွှေဈေး ဒေါ်လာဈေး တွေ
ပြန် ကျ သွား ပါ တယ် ၊ ဒီ တော့ လဲ ၊ သောက များ မိ တဲ့ လူ လတ် တန်းစား တွေ က
မိ အေး နောက် တခါ ၊ နာ ရ ပြန် ပါ တယ်။
ဒီ လစာ တိုး တာ ၊ မတိုးတာ က ၊ တိုင်းပြည် ရဲ့ စီး ပွား ရေး အမှန် ကို လွှတ်တော် ထဲ
သေချာ ဆွေးနွေး ၊ ကျိုး ကြောင်း ခိုင် လုံ မှ ၊ ဆုံး ဖြတ် ဆောင် ရွက် သင့် ပါတယ်။
အကြောင်း ရင်း အခြေ ခံ ၊ ဘာ မှ မရှိ ဘဲ ၊ ဘဝ ရှင် မင်းတရားကြီး ရဲ့ တချက် လွှတ်
အမိန့် လို မျိုး ၊ ဘဏ္ဍာတော် တိုက် က လို သလောက် သုံးစေဗျား ၊ ပလို့ ဂျိ ၊ ဒူ ဝေ ဝေ
ဆိုပြီး ပွဲ ထဲ က လူ ပျက် လို ၊ ပါးစပ်ဆိုင်း လေး တီး ပြီး ၊ ထင် ရာ အမိန့် ထုတ် ရင်
တိုင်းပြည် စီးပွား ရေး မှာ အင်မတန် နစ် နာ ပါ တယ်။
အခုတော့ ဈေး တွေ ၊ နင်းကန် တက် ပြီး က မောက် က မ ဖြစ် သွား တာ ၊ လူ တွေ မှာ
ကိုယ့် ရှိ တဲ့ ပြည်တွင်း သုံး ငွေ လေး အတွက် ၊ သော က များ ရ တာ ဘဲ အဖတ် တင်
ကျန်ရစ် ခဲ ပါတယ် ၊ အဆိုး ဆုံး ထိ တာ တွေ က ၊ ပုတ်ဂလိ က လုပ်ငန်း တွေ မှာ ပါ။
အဲဒီ ရက် တွေ တုံး က ၊ လှိုင်သာယာ တို့ ၊ ရွှေ ပြည် သာ တို့ ၊ ပဲခူး တို့ မှာ ရှိ တဲ့
အထည်ချုပ် စက် ရုံ တွေ ၊ ဘိနပ် စက်ရုံ တွေ မှာ ဒီ လစာ ကိတ် စ နဲ့ ဘဲ ၊ ဆန်ဒပြ တာ
တွေ ဖြစ် ခဲ့ ကြ ပါ တယ် ၊ အခုတော့ ဆန်ဒ ပြ တာ တွေ ၊ ပြီး သွား ကြ ပါ ဘီ။
အစိုးရ ဝန်ထမ်းတွေ လစာ ၃ ဆ ၄ ဆ တိုးပေး မယ် ၊ ကောလဟလ ကြား ရ တော့ ၊ အပြင်
ဝန်ထမ်းတွေ လဲ လခ တိုးရချင် တာပေါ့ ဗျာ ၊ ၂ဝဝ၆ တုံး က အစိုးရ လစာတွေ တိုးပေး
လိုက်တော့ အပြင် ကုန်ပဏီ ဝန်ထမ်းတွေ ချက် ချင်း လခ တိုး မပေး နိုင် ပါဘူး။
လခ တိုး ပေး နိုင် ဘို့ အချိန် အတော် စောင့် ကြ ရ ပါ တယ်။
အခုတော့ အစိုးရ က တိုးပေးမယ် ကောလဟလ ကြား တာ နဲ့ အခု ကတဲက ဆန်ဒ ပြထား မှ
အတော် လောက် ကျ မယ် စိတ်ကူး တွေ နဲ့ စောစော စီးစီး ကြို ပြီး ဆန်ဒ ပြ ကြ တာပါ။
စက်ရုံ တခု ချင်းစီ ရဲ့ သူ့ အကြောင်း နဲ့ သူ ဆို တော့ ၊ အစိုး ရ ကလဲ ဝင် မပါ ပါဘူး
ဂျာနယ် တွေ သတင်း စာ တွေ ထဲ လဲ မပါ ပါဘူး ။ ဝုန်း က နဲ လစာ ထ တိုး ဘို့ ဆို တာ
အပြင် စီးပွား ရေး လုပ် ငန်း တွေ အနေ နဲ့ အတော် ခက် ပါ တယ် ။ သူ့ စီးပွား က
တကယ် အမြတ်အစွန်း ရှိ လာ မှ တိုး ပေး နိုင် တာ ပါ ၊ အမှန် အား ဖြင့် ငွေဖောင်းပွ မှု
နှုန်း မြင့် လာ မှာ ၊ အပြင် က လစာ တိုး ပေး နိုင် အား ရှိတာပါ။
အပြင် အထည်ချုပ် အလုပ်ရုံတွေ မှာ ဆန်ဒ တွေ ပြကြ တော့ ၊ ပိုင် ရှင် ဘက် ကအလုပ် တွေ
ပျက် ၊ အလုပ် သမားဘက် က အလုပ် တွေ ပြုတ် ကြ ၊ ဆန်ဒ ပြ တဲ့ ရက် ကို လခ မရ ကြ
နဲ့ ၊ အတော် ဒုတ်ခ များခဲ့ ကြ ပါ တယ် ၊ ဒါ က ဘာ မှ မဟုတ်သေး ဘူး ၊ တကယ် လဲ
လခ မတိုး ပေး သေး ဘူး ၊ ကောလဟလ အကြား နဲ့ တင် ဒုတ် ခ များ ကုန် တာပါ။
အခု နောက် ဆုံး ကြား ရ တာ က ၊ စက် ရုံ အသီးသီး က ဆန်ဒတွေ ပြ ပြီး တဲ့ နောက်
တနာရီ လုပ်ခ ကို ၂ဝ ကျပ် နှုန်း တိုး လာတယ် ကြား ရ ပါတယ် ၊ တနေ့ လုံး ၁ဝ နာရီ
လောက် ကြုံး လုပ် မှ ၂ဝဝ တိုးမယ် ၊ တလ လုံး ရက် ၃ဝ လုံး တရက် မှ မနား မှ ၆ဝဝဝ တိုး
မဲ့ သဘော ရှိပါတယ် ၊ အပေါ် မှာ ရေးပြ ထား သလို ၊ ကား စီး ရ တဲ့ အရာ ရှိ က ဓါတ်ဆီ
ရောင်းတာတင် တလ၃ သိန်း ခွဲ လောက် အသားတင် ဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့် ကြ ပါ ခင် ဗျာ။
အခု ကျွန်တော် ရေး မှာ က သတင်း မဟုတ် ပါဘူး ၊ ကျွန်တော့် အထင် ကို ရေး မှာ ပါ။
အစိုးရ က လစာ တိုးပေးဘို့ စိတ်ကူး ရှိ တာ က ၊ ဝန်ထမ်း တွေ ကို ပေးဘို့ ဆို တာ ထက်
စစ်သားတွေ ကို တိုးပေး ချင် တာ ဖြစ် မှာ ပါ ။ အခု စစ်သား လုပ် ချင် တဲ့ သူ တွေ မရှိကြ
တော့ စစ်သား တွေ ကို အောက် ထစ် ၊ လစာ နှုန်း ၁ သိန်း ခွဲ ၂ သိန်း တိုး ပေး လိုက် ရင်
စစ် ထဲ ဝင် ချင် သူ တွေ ၊ အတော် များ လာ မယ် လို့ ထင် နေ ပုံ ရ ပါ တယ်။
ဒါ ကို ကျွန်တော် ဘာ ကြောင့် ရေး ရ သလဲ ဆို ရင် ၊ တနေ့ က ဈေး ထဲ သွား တော့
ဈေးဆိုင် ပိုင် ရှင် နဲ့ သူ့ ဆိုင်က ကုန်ထမ်း အလုပ် သမား စကားများ နေ တာ ကြားရ ပါတယ်
ဈေး ဆိုင် ပိုင်ရှင် က သူ့ အလုပ်သမား ကို နင် တို့ လက်ကြော မတင်းဘူး ၊ ကုန် ထမ်း ခ ကျ
တိုးပြီး ရ ချင် တယ် ၊ စ သဖြင့် ပူညံ ပူညံ ပြော ပါ တယ်။ အဲဒီ ကုန်ထမ်း သမား က ဘာ
ပြန်ပြော လိုက် လဲ ဆို တော့ ၊ အမ ၊ ခန နေ ရင် အစိုးရ က စစ်သားတွေ ကို လစာ အများ
ကြီး ပေး မှာ ၊ အဲလိုမျိုး ဆို ရင် တော့ ၊ ဒီ ဈေး ထဲ က ဖိုးနီ တို့ တဖွဲ့လုံး ရော ၊ ကျွန်တော်
တို့ ရော အကုန်၊ စစ်သား ခန တဖြုတ် အကုန် သွား လုပ် ကြ မှာ ဗျ ၊ အဲဒီ တော့ မှ အမ က
ကုန်ထမ်းမဲ့ သူ ရော ၊ ဆိုက်ကား သမား တွေ ပါ မရှိ တော့ လို့ ဆိုင် မဖွင့် ရ ဘူး ဖြစ် သွား
မယ် တဲ့ လို့ ၊ ခပ် တင်း တင်း ပြန် ပြော နေ တာ ကြား ခဲ့ ရ ပါ တယ်။
ခေါင်း တောင် အတော် ကြီး ပြီး ၊ နား ပါ ကား သွား ပါ တယ် ၊ အဲ လို မျိုး စစ် တပ် ဆို ရင်
ဘယ်လို တပ် မျိုး ဖြစ်လာပါ မှာ လဲ ၊ သေချာ တာ က တော့ ကြေးစားစစ်တပ် ဖြစ် သွား ဘို့
များ ပါတယ် ၊ အနေ အစား ချောင် မယ် စိတ်ကူး နဲ့ ၊ လက် ကြော မတင်း သူ တွေ ၊ အပြင်
မှာ သုံး မ ရ သူ တွေ ၊ ကလေ ကချေ တွေ ၊ စစ် ထဲ အကုန် ဝင် ကြ လို့ ၊ ဒီ လို လူ တွေ
လက် ထဲ ကို ၊ သေနတ် တွေ များ ရောက် သွား ခဲ့ ရင် ၊ မ စဉ်း စား ဝံ့ ပါ ခင် ဗျာ ။
အခု ကျွန်တော် ရေးတာ က စစ်တပ် ကို ပုတ် ခတ် ရေးတာ မဟုတ် ပါ ၊ စစ်သား တွေ ပင်ပမ်း
တာ ၊ ၂၄ နာရီ တာဝန် ရှိ တာ ၊ အသက် စွန့် လုပ် ရ တာ ကျွန်တော် လက် ခံ ပါ တယ်။
အခု လက်ရှိ လစာ မှာ လဲ စစ်သား နဲ့ အရပ်သား ဝန်ထမ်း လစာ ကွာပြီး သားပါ။ ရိုးရိုး
တပ်ရင်းမှူး လစာ က အရပ်သား ညွှန်ချုပ် ထက် များ ပါ တယ်၊ ဗိုလ်ကြီး လစာ က ညွှန်မှူး
လစာ ထက် များ ပါ တယ်။ အပွင့် ပါ တဲ့ သူ တွေ က လစာ နဂို က တဲက များပြီးသား ပါ။
အပွင့် မပါသေး တဲ့ တပ်ကြပ် ၊ တပ်သား လစာ တွေ က လစာနဲ နေတာပါ။ ကွာ ပါ တယ်။
အရင့် အရင် အစိုးရ တွေ လက် ထက် တုံး က ၊ ရဲ ဘော် ရ တဲ့ လခ ၊ ရိတ်ခါ ၊ ဆန်
နို့ဆီ သကြား ၊ နေ့စဉ် အသား ငါး တွေ က ၊ စား လောက် ပါ တယ်။ အခု အဲဒါ တွေ
မ ပေးတော့ ဘဲ ၊ ပိုက်ဆံ ဘဲ ပေး ထား တော့ ၊ ဘာ မှ အသုံး မခံ ဘူး ဖြစ် ရ တာပါ။
အဲလို ပစ်စည်း ရိတ်ခါ တွေ ပေးတော့ လဲ ၊ စစ်တပ် ထဲ အဆင့် ဆင့် ၊ မသမာ တာ တွေ က
အများကြီး ဖြစ် ပါ တယ် ၊ အပြင် က ဆန် တအိတ် ၂၄ ပြည် ၊ ပေါင် ၈ဝ ဆို ပေ မဲ့
စစ်သား ရ တဲ့ ဆန် တအိတ် က ၁၅ ပြည် ပါ လာ ရင် ကံ ကောင်း ပါ။ ဆန် တို့ ပဲ တို့
ဆိုရင် လဲ ပစ်စည်း ကိုင် တဲ့ ဆပ်ပလိုင်း ဆရာ တွေ က ကောင်းတာတွေ အကုန် ရောင်း
မကောင်း တာ တွေ နဲ့ လဲ ထားကြ ဆို တော့ ၊ တကယ် စစ်တိုက် ရ တဲ့ ရှေ့တန်း နေ ရာ
တွေ မှာ ဆန် က အညံ့ ၊ ပဲ က ပိုးထိုး တွေ ဘဲ ရောက် လာ ပါ တယ်။ ထမင်း မ ဝ ဘဲ
ဘယ် လို လုပ် ၊ စစ်သား က စစ် တိုက် နိုင် ကြ မှာ လဲ ခင် ဗျာ ။
စစ်တပ် ထဲ အကျင့် ပျက်နေတာတွေ ကို ဘဲ ၊ အရင် တကယ်တမ်း ထိထိ ရောက်ရောက်
ထိမ်းသင့် ပါ တယ် ၊ စစ် သားတွေ က စစ်သား မလုပ်ချင် ကြ တော့ တာ ၊ ဘာကြောင့် လဲ
အရင်စဉ်းစား သင့် ပါ တယ် ၊ လစာ နဲ့ မက်လုံးပေးပြီး စည်းရုံး လို့ ရ မယ် ၊ ထင် ခဲ့ ရင်
တော့ တိုင်းပြည် အတွက် ရော ၊ စစ် တပ် အတွက် ပါ ၊ အတော် မှား ပါ လိမ့်မယ်
လို့ ကျွန်တော် က ထင် ပါ တယ် ခင် ဗျာ ။ ဒါ က ကျွန်တော့ ကိုယ်ပိုင် အမြင်ပါ ခင်ဗျာ ။
သတင်း ရေး တာ မဟုတ် ဘဲ ၊ မျက် စိ နဲ့ မြင် ရ တာ ကို ပြော ပြ တာ ပါ ။
အဲ လို မျိုး ၊ စိတ် ကူး နဲ့ စစ် သားတွေ ကို လစာ ၊ ဂဏန်း တိုး ပေး လိုက် ရင် တော့ ၊
ကုန်ထမ်းသမား ကို စစ်သား လစာ ထက် ကျော် အောင် ပေး ရ ပါ တော့ မယ်။ ဆိုက် ကား
သမားတွေ သွေး နထင် ရောက် ပြီး ၊ ဆိုက် ကား ခ တွေ တိုး ပြီး တောင်း လာ ပါလိမ့် မယ်။
အပေါ် မှာ ရေး ပြထား တဲ့ ၊ ဘိနပ်ချုပ် ၊ အထည် ချုပ် ၊ အလုပ် သမားတွေ က လည်း ၊
တနေ့ တနေ့ ဆန်ဒ ပြ လို့ ပြီး မယ် ၊ မထင် တော့ ပါ ခင် ဗျာ ၊ အလုပ်ရှင် တွေ မှာ လဲ
စီးပွားပျက်ကြ ရ ဘို့ များ ပါ တယ် ၊ ခင် ဗျာ ၊ နောက် ဆုံး တော့ ၊ ဘယ် လောက် လစာ
တွေ တိုးပေး တိုးပေး ၊ အကြောင်း ဆက် တွေ ချာ လည် လည် ပြီး ၊ တိုင်း ပြည် လဲ
ဇင်ဘာဘွေ နိုင် ငံ ကိန်း ကို ဆိုက် သွား ရ ဘို့ များ ပါ တယ် ခင် ဗျာ။
ကျွန်တော်မြင်တာ က တော့ လစာ တွေ ကို ငွေစက်ကူ ရိုက်ပြီး တိုး ပေး မဲ့ အစား၊ အစိုးရ
ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်း အတွင်း အလဟသ လေ လွင့် ၊ မသမာ ၊ ကိုယ် ကျိုး ရှာတာတွေ
စစ်တပ် အတွင်း ဥပဒေ အရ ရဲဘော် တယောက် စားရ မဲ့ ထမင်း ရိတ်ခါ ပြည့် ပြည့် ဝဝ
စား နိုင် ရ အောင် ၊ အဆင့်ဆင့် ဖြတ်စား လပ်စားတွေ မရှိအောင် အရင် ကြိုးပမ်း တာ က မှ
ကိုယ့် ပြည် တွင်း ငွေ လေး လဲ တန်ဘိုး ရှိ ၊ စစ် သား က လဲ ကိုယ် စစ်သား ဖြစ် ရ တာ
ကိုယ့် ခံ ယူချက် နဲ့ ကိုယ့် အလုပ် ကိုယ် ဂုဏ်ယူ နိုင် သူ တွေ ဖြစ် လာ မယ် ထင် ပါတယ်။
အခု ကြားနေ ရ တဲ့ ၊ ကောလဟလ က တော့ ၊ လာ မဲ့ မတ် လ ၂၇ ရက် နေ့ မှာ ၊ အရင် လို
တပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြပွဲကြီး မလုပ် တော့ ပါ ဘူး တဲ့ ၊ အကျဉ်းရုံး ဘဲ လုပ် တော့ မှာ ပါ
တဲ့ ခင် ဗျ ၊ ပြီးတော့ အဲဒီ နေ့ အခေါ်အဝေါ် ( တပ်မတော်နေ့ ) ဆိုတာ ကို လဲ နာမည်ပြောင်း
ပါမယ် တဲ့ ခင် ဗျ ၊ ဗမာလိုတော့ အမည်ပေးထားပြီး အင်္ဂလိပ် လို ခေါ် ဘို့ စိတ်ကြိုက် နာမည်
စဉ်းစား နေကြတာ၊ စကားလုံး လှ လှ ရဘို့ ၊ အဆင် မပြေ သေး ပါဘူး တဲ့ ခင် ဗျ ။
တိုင်းပြည် အတွက် တပ်မတော် က အင်မတန် အရေးကြီး ပါ တယ်။
သမိုင်း အစ အနော်ရထာ လက်ထက် က စ လို့ တပ်မတော် အဆက်ဆက် ဂုဏ် ရောင် ပြောင်
ခဲ့ သလို ၊ အနာဂါတ် တပ်မတော် ဟာ လဲ ၊ အခု လို မျိုး ၊ ပိုက် ဆံ များ များ ပေး ထား မှ
စစ်သား လုပ်စား ကြ မဲ့ သူ တွေ ၊ ကလေ ကချေ တွေ နဲ့ ဖွဲ့ စည်းထားတာ မျိုး မဟုတ် ဘဲ ၊
ပြည်သူ တွေ ၊ စိတ် ထဲ က နှစ် နှစ် ကာ ကာ ၊ လေး လေး စား စား ၊
အမှန် တကယ် ကြည်ညို ၊ ချစ် ကြည် နိုင် မဲ့ ၊ တိုင်း ချစ် ပြည်ချစ် တပ် မ တော် ကြီး အဖြစ်
မနှေး ၊ အမှန် ၊ အမြန် ၊ မြင် ရ နိုင် ရ ပါစေ ကြောင်း ၊ ပါ ပ ဗျား ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/22/20110အကြံပြုခြင်း
22 march 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
2608K View Download
22 march 2011 Yeyintnge's Diary.doc
2209K View Download
http://www.mediafire.com/file/2zahw51zhqt3vu9/22%20march%202011%20Yeyintnge%27s%20Diary.pdf22 march 2011 Yeyintnge's Diary
CFOB’s response to Globe and Mail’s articles on Burma
By Canadian Friends of Burma, Ottawa -March 22, 2011
The Canadian Friends of Burma (CFOB) wants to bring your attention onaseries of articles written by Mark MacKinnon, the Globe and Mail’s China-based correspondent.
Mark, who was alsoafree Burma activist in 1990s, visited to Burma for two weeks in February and produced eight pieces including six articles and an interview with Burmese democracy leader Daw Aung San Suu Kyi.
However, his articles that appear to be in favour of easing Canada’s toughest economic sanctions against the Burmese regime, is creatingawave of discussions among activists, academics and even within policy-makers.
The Canadian Friends of Burma (CFOB) that ledadecade-long campaign for stronger measures against the repressive regime in Burma questions his reasoning.
CFOB believes that it’s too early to make any changes in the current Canadian foreign policy towards Burma withoutasubstantial political progress including the release of 2000-plus political prisoners,ahalt to military offensives against ethnic minorities and accessibility to the people in need of humanitarian assistance in conflict zones.
CFOB is currently in consultation with our supporters and constituencies on this issue and will be able to provide further update.
Please see enclosed links for Mark’s articles on the Globe and Mail.
· Myanmar students prepare for freedom inacandlelit room
Mar 08, 2011 – Although repression has left many of their contemporaries apathetic about politics,adedicated core of Myanmarese students are laying the groundwork forademocratic future
· Myanmar’s AIDS strategy: treat only the sickest
Mar 07, 2011 – Access to antiretroviral drugs in the Southeast Asian dictatorship is believed to be the worst in the world, with the result that by the time patients receive them, it is often too late
· Myanmar’s new capital weirdest jewel in junta’s crown
Feb 20, 2011 – Sterile Naypyidaw ‘physically and intellectually isolated from not only the rest of the world, but even from the rest of the country’
· Narrated slideshow: Good and evil in Myanmar
Feb 18, 2011 – The Globe's Mark MacKinnon reports on his undercover visit to Myanmar.
· Myanmar: Where the generals play and the people pay
Feb 18, 2011 – During an undercover visit to Myanmar, Mark MacKinnon concludes that sanctions policies like Canada's do more harm than good. This isn't apartheid. The authoritarian regime it most resembles is China, where at least foreign investment gives the poorachance
· Aung San Suu Kyi on Egypt, sanctions and raising the megabyte
Feb 18, 2011 – An exclusive interview with the Nobel Peace Prize winner and leader of Myanmar’s pro-democracy movement
၁၉၄၅ အလွန် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးလောကမှာ အချုပ်အခြာအာဏာ ကစားပွဲ (Sovereignty Game) ဆိုတဲ့ သဘောတရား က ခေတ်စားလာခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတခုရဲ့ ရပ်တည်နိုင်မှု (survival) ဟာ စစ်အင်အားဆိုတာပေါ်မှာ မူတည်နေခဲ့တာ ကြောင့် ကမ္ဘာတလွှားမှာ စစ်ပွဲတွေ၊ ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်မှုတွေ၊ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့စနစ် ကျင့်သုံးမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ ကြောင့် နိုင်ငံတခုရဲ့ ရပ်တည်မှုဟာ ကျူးကျော်စစ်တွေအပေါ် ခုခံစစ်စွမ်းပကား (defensive military capabilities) တ ခုတည်းပေါ်မှာ မူတည်ခြင်း မရှိဘဲ အချုပ်အခြာအာဏာ (sovereignty) ကို နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအရ အကာအကွယ်ပေး မှုပေါ်မှာ မူတည်ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားတွေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီသဘောတရားတွေအရ နိုင်ငံတခုကို အခြား နိုင်ငံတခုက စစ်ရေးအင်အား အသုံးပြုမှု (The Use of Force) အား ထိန်းချုပ်မှုတွေကို Article2(4), Articles (39-51) of UN Charterနဲ့ Article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 တို့မှာ ဖော်ပြထားခဲ့ ပါတယ်။
ဒီလို စစ်ရေးအင်အားအသုံးပြုမှုအား ထိန်းချုပ်ခြင်း (prohibition of the Use of Force) ဟာ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး မှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက လက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ acceptable norm တခု ဖြစ်နေပေမယ့်လဲ အကြောင်းကြောင်းအရရ စစ်အင်အားအသုံးပြုရတဲ့ အခြေအနေတွေလဲ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတခု (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံအစု အဖွဲ့တွေကနေ နိုင်ငံတခုကို စစ်ရေးအင်အား အသုံးပြုမှုကို ဘယ်လိုအချိန်အခါ၊ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာ ပြုလုပ်သင့် တယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားမှုတွေ၊ လေ့လာသုံးသပ်မှုတွေ ရှိလာပါတယ်။ အခုဒီဆောင်းပါးမှာ စစ်ရေးအင် အားအသုံးပြုမှု (The Use of Force) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Just War Doctrine နဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုဖြင့် ၀င်ရောက်စွက် ဖက်ခြင်း (Humanitarian Intervention) တွေကို ရေးသားတင်ပြပါမယ်။
၂၀ ရာစုနှောင်းပိုင်းနဲ့ ၂၁ ရာစု စစ်ရေးအင်အားအသုံးပြုမှုတွေမှာ Just War Doctrine ကို အသုံးပြုပြီး ဒီစစ်ပွဲတွေရဲ့ တ ရားမျှတမှုကို လေ့လာဆန်းစစ်ကြပါတယ်။ Just War Doctrine သဘောတရားရဲ့ အခြေခံက laws of armed conflict ရဲ့ functions နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ jus ad bellum (lit. the law towards war) နဲ့ jus in bello (lit. the law in war) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ jus ad bellum က နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာ စစ်ရေးအင်အားအသုံးပြုမှုကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ရှားရန်၊ အသုံးပြုမှုအား ကန့်သတ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး၊ jus in bello ကတော့ မလွဲမရှောင်သာ စစ်ရေးအင်အား အသုံးပြုရတဲ့အခါ စစ်ပွဲတွင်းမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ ထိခိုက်မှုတွေ လျော့နည်းရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
Just War Doctrine အရ စစ်ရေးအင်အားအသုံးပြုမှုရဲ့ တရားမျှတမှုကို jus ad bellum နဲ့ jus in bello ဆိုင်ရာ သတ် မှတ်ချက်တွေနဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။ Jus ad bellum criteria အရ နိုင်ငံတခုဟာ အခြားနိုင်ငံတခုအပေါ် စစ်ရေးအင်အား အသုံးပြုမှုဟာ တရားမျှတကြောင်း ဖော်ပြနိုင်ဖို့ တရားဝင်အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း (legitimate authority), တရားမျှတ သော အကြောင်းရင်း (just cause), မှန်ကန်သော ရည်ရွယ်ချက် (right intention), အောင်မြင်မှုအလားအလာ (chan ce of success), အချိုးအစား (proportionality), နောက်ဆုံးနည်းလမ်း (last resort) ဆိုတဲ့ အချက် အများစုနဲ့ ပြည့်စုံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ရေးအင်အားအသုံးပြုဖို့ တရားဝင်အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ခွင့်ပြုချက် လိုအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း ကု လသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရှိမှသာ နိုင်ငံတကာရေးရာမှာ စစ်ရေးအင်အား အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ UN Ch arter Article 39 နဲ့ Article 42 အရ နိုင်ငံတနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းချောက်လာကြောင်း ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်း ဖို့အတွက် လိုအပ်မယ့် air, sea, land forces တွေကို အသုံးပြုရတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့ပေ မယ့် နိုင်ငံတကာ လုံခြုံရေးကို ထင်ထင်ရှားရှား ထိခိုက်မှု မရှိလို့ပဲဖြစ်စေ၊ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ အားနည်း ချက်တွေကြောင့်ဖြစ်စေ၊ လုံခြုံရေးကောင်စီက စစ်ရေးအင်အား အသုံးပြုမှု ခွင့်ပြုချက် မပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေ ပေါ် ထွက်လာပါတယ်။
အဲဒီအခြေအနေတွေမှာ ဒေသဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရတွေအနေနဲ့ စစ်ရေးအင်အားကို အ သုံးပြုရတဲ့ အခြေအနေတွေလဲ ရှိလာပြန်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ပေးရ မယ့် အစိုးရကိုယ်တိုင်က ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ရန်ရှာလာတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ နိုင်ငံတော် အုပ် ချုပ်ရေး ယန္တရားပြိုလဲသွားပြီး၊ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး ကွဲပြားမှုအပေါ် အခြေခံတဲ့ အုပ်စုတွေ အချင်းချင်း သတ်ဖြတ် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားလာတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းရေးကို စစ် ရေးအင်အားသုံး ၀င်ရောက်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း ရှိမရှိနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားမှုတွေ ဖြစ်ပွားလာရာကနေ The Right to Protect (R2P) သဘောတရားတွေပါ ထပ်မံပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
Jus ad bellum criteria အရ ဒုတိယအချက်ကတော့ တရားမျှတသော အကြောင်းရင်း (just cause) ဖြစ်ပါတယ်။ စစ် ရေးအင်အားအသုံးပြုမှုကို ဖြစ်ပွားစေခဲ့တဲ့ တရားသော အကြောင်းရင်းတွေရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံး အ ကြောင်းရင်းကတော့ မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ခြင်း (self-defence) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံကို အခြားနိုင်ငံတခုက စစ် ရေးအရ တိုက်ခိုက်လာခဲ့ရင် စစ်အင်အားအသုံးပြုပြီး ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်ရေးလေ့ လာသူများအကြား အငြင်းပွားစရာ အချက်တခုကလဲ ထပ်မံပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ မိမိနိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံကို စစ်ရေးအင်အားသုံး တိုက်ခိုက်မှု (preemptive self-defence) ဟာ တရားမျှ တသော အကြောင်းရင်း ဖြစ်ခြင်း၊ မဖြစ်ခြင်း ဆိုတာပါပဲ။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အာဖဂန်နစ်စတန်နိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်မှုဟာ ဒီသဘောတရားပေါ်မှာ အခြေခံထားပါတယ်။
နောက်ထပ် အချက်တခုကတော့ မှန်ကန်သောရည်ရွယ်ချက် (right intention) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အင်အားအသုံးပြုမှု ဟာ အာဏာလွန်ဆွဲဖို့အတွက် မဟုတ်ရပါဘူး။ စစ်ပွဲဖြစ်ပွားရာ နယ်မြေမှာ ရေရှည်ခံငြိမ်းချမ်းရေး (sustainable peace) နဲ့ လူသားလုံခြုံရေး (human security) ကို တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် ဖြစ်ရပါမယ်။ ဒီအချက်နဲ့ စစ်အင်အား အသုံး ပြုမှုရဲ့ တရားမျှတမှုကို တိုင်းတာသုံးသပ်ကြပါတယ်။
နောက်ထပ်ထင်ရှားတဲ့ အချက်ကတော့ အောင်မြင်နိုင်သော အလားအလာ (chance of success) ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၁ ရာ စုမှာ သူရဲကောင်းဝါဒ (heroism) ကို အခြေခံတဲ့ suicide missions တွေကို ပြည်တွင်းစစ်တွေနဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက် မှုတွေမှာပဲ အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ ပရော်ဖယ်ရှင်နယ် စစ်တပ်တွေနဲ့ စစ်ရေးနား လည်သူတွေက အောင်မြင်နိုင်သော အလားအလာမရှိတဲ့ စစ်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိကြပါဘူး။ တန်ဖိုးရှိပြီး ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ ရည်မှန်းချက် (valuable and clear goals) တွေ မရှိဘဲ စစ်အင်အားအသုံးပြုမှုဟာ တရားသော စစ် မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်ပွဲဆိုတာ တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေနဲ့ စစ်ပွဲဖြစ်ပွားရာနယ်မြေဒေသက ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုး အိမ်စည်းစိမ်ကို တိုက်ရိုက် ခြိမ်းချောက်တဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အောင်မြင်နိုင်သော အလားအလာကို တွက် ချက်သုံးသပ်မှုတွေနဲ့ ရည်မှန်းချက် သတ်မှတ်မှုတွေကို စစ်ပွဲမစခင်ကတည်းက ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်အချက်ကတော့ အချိုးအစား (proportionality) ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အင်အားအသုံးပြုမှုဟာ ခြိမ်းချောက်မှု၊ မတ ရားမှုတွေ ခံစားရမှုတွေအတွက် မှန်ကန်သော အချိုးအစားနဲ့ အသုံးပြုမှုဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း တွေနဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေက နိုင်ငံတနိုင်ငံကို စစ်အင်အားအသုံးပြု တိုက်ခိုက်ခြင်း မပြုလုပ်ခင်မှာ စစ်ပွဲ၏ ရလဒ်များ (outcomes of war) ကို ချိန်ဆတွက်ချက်လေ့ရှိပါတယ်။ စစ်ပွဲရဲ့ရလဒ်တွေဟာ စစ်ပွဲမတိုင်မီ အခြေအနေထက် ပိုပြီး ဆိုးကျိုးကို ဦးတည်စေရင် စစ်ရေးအင်အားကို အသုံးပြုခြင်း ပြုလုပ်လေ့ မရှိပါဘူး။
နောက်ထပ်အချက်တခုကတော့ နောက်ဆုံးနည်းလမ်း (last resort) ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ပွဲကိုရှောင်ရှားနိုင်မယ့် အခြားနည်း လမ်းတွေဖြစ်တဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှု၊ သံတမန်နည်းလမ်းများဖြင့် ဖြေရှင်းမှု၊ constructive engagement ပြု လုပ်မှုစတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ လုံးဝအောင်မြင်မှု မရှိနိုင်မှသာ စစ်ရေးအင်အား အသုံးပြုမှုကို ပြုလုပ်ကြပါတယ်။
jus in bello function (lit. the law in war) ကတော့ စစ်ဥပဒေတွေဖြစ်တဲ့ Geneva law နဲ့ Hague law တွေကို အ ခြေတည်ထားပါတယ်။ Geneva law က စစ်ရေးပဋိပက္ခရဲ့ သားကောင်တွေကို ကာကွယ်ရေးအပိုင်းတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး၊ Hague law ကတော့ စစ်ပွဲများ အသုံးပြုတဲ့ နည်းလမ်းတွေ၊ ဗျူဟာအခင်းအကျင်းတွေ၊ စစ်လက်နက် အသုံးပြုမှုတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပါတယ်။ စစ်ရေးပညာရှင်များက jus in bello နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်ရေးအင်အားအသုံးပြုမှုရဲ့ တရားမျှတမှုကို တိုင်းတာဖို့ criteria နှစ်ခုကို အသုံးပြုပါတယ်။ ပထမတခုကတော့ အချိုးအစား (proportionality) ဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယ တခု ကတော့ ခွဲခြားသတ်မှတ်မှု (discrimination) ဖြစ်ပါတယ်။
အချိုးအစား ဆိုရာမှာ စစ်ဆင်ရေးနည်းလမ်း အသုံးပြုမှု အချိုးအစားဟာ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ အချိုးအ စားညီမျှမှု ရှိခြင်းကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ရေးအင်အားအသုံးပြုမှု မပြုလုပ်ခင်က ချမှတ်ထားတဲ့ စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ သွေဖည်ပြီး၊ collateral damage ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ စစ်ဆင်ရေးနည်းလမ်းတွေကို ရှောင်ကျဉ်ရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ခွဲခြားသတ်မှတ်မှု ဆိုတာကတော့ အရပ်သားများနဲ့ စစ်ရေးပစ်မှတ်မဟုတ်သည့် အရာများကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ တိုက်ခိုက်ခြင်း ရှိမရှိ ဆိုတာနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုစစ်ပွဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အရပ်သားများနဲ့ စစ်ရေးပစ်မှတ်မဟုတ်သည့် အရာများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ချက် ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အကြမ်းဖက်မှု (Terrorism) နဲ့ တရားသောစစ်ပွဲတွေကို ခွဲခြားထားတဲ့ စည်းဘောင်တခုလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆက်လက်ပြီး စစ်ရေးအင်အားအသုံးပြုမှု (The Use of Force) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုဖြင့် ၀င်ရောက် စွက်ဖက်ခြင်း (Humanitarian Intervention) အကြောင်းကို ရေးသားတင်ပြပါမယ်။
နိုင်ငံတခု (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံအများစုကနေ တခြားနိုင်ငံတခုရဲ့ ပြည်တွင်းရေးကို လူသားချင်းစာနာမှုဖြင့် ၀င်ရောက်စွက် ဖက်ခြင်းဆိုတဲ့ မူလအခြေခံသဘောတရားမှာ non-military means တွေဖြစ်တဲ့ အရေးပေါ်ငွေကြေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ဆေး ၀ါးပစ္စည်း၊ ကျွမ်းကျင်မှု တို့ဖြင့် ထောက်ပံ့ကူညီခြင်းနဲ့ သံတမန်ရေးရာ နည်းလမ်းများ၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု နည်းလမ်းများ ဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ခြင်း စတာတွေနဲ့ စစ်ရေးအရ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း (military intervention) တို့ပါ ပါဝင် ခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် စစ်အေးတိုက်ပွဲအလွန် ကာလတွေမှာ non-military means တွေကို humanitarian aid အနေ နဲ့ပဲ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ခေါ်ဆိုအသုံးပြုလာကြပြီး၊ humanitarian intervention ဆိုတာကို military intervention တမျိုးအနေနဲ့ပဲ သတ်မှတ် အသုံးပြုလာကြတာကြောင့် humanitarian intervention နဲ့ စစ်ရေးအင်အား အသုံးပြုမှု (The Use of Force) တို့ဟာ ဒွန်တွဲလာပါတော့တယ်။
စစ်ရေးလေ့လာသူတွေက ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီဆိုတာကို intervention ဆိုင်ရာ အဆိုးမြင်ဝါဒီတွေနဲ့ အ ကောင်းမြင်ဝါဒီတွေ အပြိုင်အဆိုင်ကစားကွင်း အနေနဲ့ သုံးသပ်ဖော်ပြကြပါတယ်။ Intervention optimism (၀င်ရောက် စွက်ဖက်ခြင်းဆိုင်ရာ အကောင်းမြင်ဝါဒ) ဆိုတာက failed states တွေကို နိုင်ငံတကာက ၀င်ရောက်ကူညီပြီး နိုင်ငံတော် သစ်ထူထောင်ပေးနိုင်မယ် လို့ ယူဆထင်မြင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Intervention pessimism (၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဆိုင် ရာ အဆိုးမြင်ဝါဒ) ဆိုတာကတော့ humanitarian crisis တွေကို နိုင်ငံတကာက consent မပေးရင် ၀င်ရောက်စွက်ဖက် ထိန်းသိမ်းခွင့် မရှိဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆပါ။
ဒီလို အယူအဆကွဲပြားမှုတွေ ကြောင့် စစ်အေးတိုက်ပွဲလွန်ကာလမှာ humanitarian intervention နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ယူ အင်ရဲ့ failures တွေ အကြိမ်ကြိမ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဆိုင်ရာ အဆိုးမြင်ဝါဒကြောင့် ရ၀မ်ဒါမှာ ရက် ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်အတွင်း လူရှစ်သိန်းသေကြေပျက်စီးမှုကို နိုင်ငံတကာက ထိုင်ကြည့်နေခဲ့ကြရပါတယ်။ ဖြစ်ပွားချိန်မှာ UN Peacekeeping force ဖြစ်တဲ့ အင်အားနှစ်ထောင့်ငါးရာရှိ United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR) က အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံတွေအကြားက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို စောင့်ကြည့်ဖို့ဆိုတဲ့ တာဝန်နဲ့ ရ၀မ်ဒါနိုင် ငံတွင်းမှာ ရောက်ရှိနေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်သစ်၊ အီတလီနဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံတပ်တွေကလဲ ပဋိပက္ခမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ ဥရောပတိုက်သားတွေကို ကယ်တင်ဖို့ နိုင်ငံ တွင်းကို ၀င်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ အရပ်သားပြည်သူတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ရည်မှန်းချက်တာဝန် မရှိတဲ့အတွက် ဒီတပ်တွေအ နေနဲ့ ရ၀မ်ဒါပြည်သူတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း မပြုနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ လူရှစ်သိန်းကျော်သေပြီးနောက်ပိုင်းမှသာ ပြင်သစ်တပ်တွေက ရ၀မ်ဒါအနောက်ပိုင်းမှာ Humanitarian Protection Zone သတ်မှတ်ဖို့ စစ်အင်အားသုံး ကြိုးပမ်း မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါက intervention pessimism ကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ failure တခု ဖြစ်ပါတယ်။
intervention optimism ကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ failure တွေလဲ ရှိပါသေးတယ်။ ၁၉၉၃ ခုမှာ ဆိုမာလီးယားပဋိပက္ခကို ၀င် ရောက်ထိန်းသိမ်းဖို့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ UNOSOM II မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးအယူအဆ ပဋ္ဋိပက္ခတွေ၊ လူမျိုးစုပဋ္ဋိပက္ခတွေ နဲ့ ပြည့်နှက်နေပြီး၊ လက်နက်ကိုင်အင်အားစု အများအပြားရှိနေတဲ့ ဆိုမားလီးယားနိုင်ငံမှာ နယ်မြေဒေသ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားတွေဟာ စစ်ဘုရင်တွေ (warlords) လက်ထဲမှာ ကျရောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ famine ဒဏ်တွေကြောင့် ဆိုမာလီးယား ပြည်သူလူထုဟာ ကြီးစွာသော ဒုက္ခတွေ၊ လူမှုဆင်းရဲတွေကို ခံစားနေကြရပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်ဘုရင်တွေက humanitarian aid ကို ကန့်သတ်မှုတွေ၊ တားဆီးမှုတွေ ပြုလုပ်တာကြောင့် ယူအင် က ပါကစ္စတန် တပ်သား ငါးရာ အင်အားရှိတဲ့ Unite Nations Operations in Somalia (UNOSOM I) ကို peacekeep ing တာဝန်နဲ့ စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။
သို့ပေမယ့် အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း မရှိတဲ့အတွက် အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ United Task Force (UNITAF) က အင်အားသုံးသောင်း ခုနစ်ထောင်ကျော်နဲ့ ၀င်ရောက်ပြီး demilitarized zones around aid operations ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်တာဝန်တွေကို အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၉၃ ရောက်တော့ လုံခြုံရေးကောင်စီ resolution အရ UNITAF က ရည်မှန်းချက်တာဝန်တွေကို (UNOSOM II) ကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် UNOSOM II ကတော့ ပိုမိုကြီးလေးတဲ့ ရည်မှန်းချက်တာဝန်နဲ့ ဆိုမားလီးယားမြေပေါ်ကို ၀င်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားနေ သော ဆိုမာလီ လက်နက်ကိုင်အင်အားစုများကို အင်အားသုံး လက်နက်ချခိုင်း၍ ဆိုမာလီးယား နိုင်ငံတော်သစ် တည် ဆောက်ရေးတွင် ကူညီအားဖြည့်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဆိုမားလီးယားစစ်မြေပေါ်က ယူအင်တပ်တွေနဲ့ အခြေအ နေက လအနည်းငယ် အတွင်းမှာတင် အင်အားပြုန်းတီးမှုတွေ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ ရည်မှန်း ချက်တာဝန် မပြည့်မီဘဲ ဆုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ ကနဦး UNITAF က ဖြည့်ဆည်းထားတဲ့ demilitarized zones သတ်မှတ် ထားမှုတွေကိုပါ ပျက်ယွင်းစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါက intervention optimism ကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ failure တခုပါ။
နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ အုပ်ချုပ်သူအစိုးရနဲ့ ပြည်သူလူထုအကြားမှာပဲ ပဋိပက္ခတွေ ရှိနေခဲ့ရင် intervention လုပ်တာနဲ့ ထိ ရောက်ပေမယ့်၊ နယ်မြေဒေသ၊ လူမျိုးစုအပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့ လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရှိနေရင်တော့ international intervention လုပ်ရုံနဲ့ မထိရောက်နိုင်ပါဘူး။ လူမျိုးစုတွေအကြားမှာ Reconciliation process ကို ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများ စွာ၊ အခန့်မသင့်ရင် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ပြုလုပ်နိုင်မှသာ ရေရှည်ခံငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အချက်ကို ဆိုမားလီးယားနိုင်ငံက သက်သေထူထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ လူမျိုးစုပဋ္ဋိပက္ခများရှိမှု၊ လက်နက်ကိုင်အင် အားစု အများအပြားရှိမှု စတဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ယူအင်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာ shadow of Somalia က ရိုက်ခတ်မှု ရှိနေတတ်ပါတယ်။ Humanitarian crisis တွေ ဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွေမှာတောင် စစ် ရေးအင်အားအသုံးပြုမှု မပါဝင်တဲ့ အခြားနည်းလမ်းတွေကိုပဲ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ Resolution ဆိုတာ ဒီလို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုဆိုင်ရာ အကောင်းမြင်ဝါဒ၊ အဆိုးမြင်ဝါဒ အားပြိုင် မှုတွေ၊ shadow of Somalia အကျိုးဆက်တွေ၊ အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ ဗွီအိုအာဏာအသုံးပြုပြီး ပါဝါဂိမ်းကစားမှုတွေ၊ အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပထ၀ီနိုင်ငံရေး အခြေအနေ၊ အကြောင်းတရားတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေ တာကြောင့် အားနည်းမှုတွေ အများအပြား ရှိလာပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ဒီလိုအားနည်းချက်တွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ The Right to Protect (R2P) ဆိုတဲ့ သဘောတရားက ထပ်မံပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
R2P ကို ပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တဲ့ အဓိက တွန်းအားကတော့ ကိုဆိုဗို အရေးကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဆိုဗိုအရေးမှာ လုံခြုံ ရေးကောင်စီရဲ့ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေက ဗွီတိုအာဏာကစားပွဲ ပြုလုပ်ကြတဲ့အတွက် ယူအင်က ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိ တဲ့ unilateral intervention တွေကို regional organizations တွေနဲ့ တနိုင်ငံချင်းစီက ပြုလုပ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) က The Responsibility to Protect (R2P) ဆိုတဲ့ စာတမ်းကို ထုတ်ပြန်ပြီး၊ လူသားချင်း စာနာမှုအရ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုတွေပြုလုပ်ရန် လိုအပ်တဲ့ သင့်လျော်သော အချိန်ကာလတခုမှာ လုံခြုံရေးကောင်စီ အ နေနဲ့ လုပ်သင့်တဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို ပြုလုပ်ဖို့ နှောင့်နှေးခဲ့ရင် General Assembly in Emergency Special Sessions မှာ စဉ်းစားဖို့နဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေက သင့်လျော်တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ကနဦးဆောင်ရွက် ပြီးမှ ယူအင်လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရယူဖို့ ဆိုတဲ့ alternative actions တွေကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။
R2P ရဲ့ သဘောတရားက The Use of Force နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခြေခံ စည်းမျဉ်းတွေကို သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ Just cause အနေနဲ့ လူအများအပြား သေကြေပျက်စီးမှုနှင့် လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုတွေကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Humanitarian intervention ရဲ့ precautionary principles အနေနဲ့လဲ မှန်ကန်သော ရည်ရွယ်ချက်၊ နောက်ဆုံးနည်း လမ်း၊ အချိုးအစားညီမျှသော နည်းလမ်းနဲ့ သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အလားအလာတို့ကို ထည့်သွင်းထားပြီး၊ operational principles အနေနဲ့ ရှင်းလင်းပြတ်သားသော ရည်မှန်းချက်တာဝန်၊ rules of engagement နဲ့ common military approach တို့ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ဖော်ပြရရင် ပဋိပက္ခတွေကို ငြိမ်းချမ်းသော နည်းလမ်းများ (peaceful means) နဲ့ပဲ ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအ ခေါ်၊ အယူအဆတွေကို ကမ္ဘာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုလုံးက လက်ခံခြင်းမရှိသမျှ ကာလပတ်လုံး စစ်ရေးအင်အားအသုံးပြုမှု (The Use of Force) ဆိုတာကတော့ ရှိနေဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ပွဲတိုင်းဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မတည်ဆောက်နိုင်ပေ မယ့် ရေရှည်ခံငြိမ်းချမ်းရေး (sustainable peace) ကို တည်ဆောက်ရတဲ့ စစ်ပွဲတွေကလဲ မလွဲသာ မရှောင်သာ ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ ရှိနေဦးမှာ အသေအချာပါပဲ။ စစ်အင်အားအပြိုင်အဆိုင်တိုးချဲ့မှုတွေ ရှိနေသမျှ ကာလပတ်လုံး တွက်ချက်တဲ့ strategic calculus တွေ မှားယွင်းပြီး၊ pre-emptive self-defence မဟာဗျူဟာနဲ့ စစ်ရေးအင်အား အသုံးပြုမှုတွေကလဲ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ရှိနေဦးမှာပါ။ ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း မပြုတဲ့ နိုင်ငံ တော်အစိုးရတွေ ရှိနေသမျှ ကာလတလျှောက်လုံးမှာလဲ စစ်ရေးအင်အား အသုံးပြုမှု အလားအလာတွေ ရှိနေဦးမှာပါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီစစ်ရေးအင်အား အသုံးပြုမှု (The Use of Force) ဟာ Just War Doctrine နဲ့ Human itarian Intervention သဘောတရားတွေနဲ့ ကိုက်ညီနေသမျှ ကာလပတ်လုံး ကမ္ဘာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အကျိုးကျေး ဇူးပြုစေမှာ ဖြစ်ပြီး၊ ဒီသဘောတရားတွေကို ကျော်လွန်သွားတဲ့ အခြေအနေကာလတခုမှာတော့ တတိယကမ္ဘာစစ်ကို ဦး တည် သွားစေမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြအပ်ပါတယ်။
ခင်မမမျိုး (၂၁၊ ၃၊ ၂၀၁၁)
(စာရေးသူသည် ယူကေနိုင်ငံမှ စစ်မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးဆိုင်ရာ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ ရရှိထားပြီး၊ စစ်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်နှိမ်နင်းရေးဆိုင်ရာ သုတေသီ တဦး ဖြစ်ပါသည်)
United Nations. “United Nations Charter.” United Nations. 25 November 2008 <www.un.org>.
ရခိုင်ပြည်မြို့တော် စစ်တွေတွင် ယနေ့နံနက်က ၂၁ ရာစု ပင်လုံသို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ပိုစတာများကို နေရာ အနှံ့အပြားတွင် ကပ်၍ တွေ့ကြရကြောင်း မြို့ခံများက ပြောသည်။
အမည်မဖေါ်လိုသူ အမျိုးသမီး တစ်ဦးက " မနက် ၆ နာရီ မိုးလင်းတာနဲ့ ပိုစတာတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ အစပိုင်းတော့ အစိုးရက ကပ်တဲ့ ပိုစတာလို့ ထင်ခဲ့ပါတယ်။ ရဲတွေက လိုက်ခွာနေတာကို တွေ့ရမှ ဒီပိုစတာတွေဟာ ဒီမိုရေစီ အရေး လူပ်ရှားနေသူတွေက ကပ်သွားတယ်ဆ်ိုတာကို သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူတွေ ကပ်သွားတယ်ဆိုတာတော့ မသိပါဘူး" ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ ပိုစတာထဲတွင် အပေါ်ပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်ဖြင့် ဟု ပါရှိပြီး အလယ်တွင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ၈ မျိုးက လက်ချင်းချိတ်ပြီး မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး ကျောက်တိုင်ကို ၀ိုင်းရံထားကာ အောက်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်ကြပါစို့ဟု ပါရှိသည်။ ပိုစတာ၏ အောက်ဆုံးတွင် ၂၁ ရာစုပင်လုံသို့ ဟု ပါရှိကြောင်း သိရသည်။
(ကမ္ဘာကဗျာနေ့မှာ ဆရာဦးဝင်းတင်က မြန်မာပြည်နဲ့ ဂျပန်ပြည်က ပြည်သူတွေအတွက် ရေးတဲ့ ဟိုက္ကူကဗျာ)
လူ - စက် - မြို့ - မြိူဝါး
ငတ် - မွဲ - ကန်း ပိပြား
ဒို့ စာနာ ကြေကွဲ
(ဂျပန်ပြည် ဆူနာမီနဲ့ ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ဘေးဒုက္ခရောက်ကြရသူ ဂျပန်ပြည်သူ ပြည်သားများအတွက် မြန်မာကဗျာဆရာများက အမှတ်တရ ကဗျာလှုပ်ရှားမှုနှင့် ကူညီမှုအလှူပွဲ အတွက် ဆရာက ရေးပေးတဲ့ ဟိုက္ကူကဗျာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ပေးသူများ ရှိရင် ကောင်းမှာပဲ)
လစ်ဗျား၊ မြန်မာနဲ့ ဂျပန်ပြည်က နိုင်ငံသားများ ဘာတွေ ကွဲပြားသလဲ
မိုးမခ၊ မတ် ၂၂၊ ၂၀၁၁
ဒီတပတ်မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းတင်နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံတကာက စိတ်ဝင်စားတဲ့ အရေးအခင်းနှစ်ခုက အရှိန်မြှင့်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လစ်ဗျားအာဏာရှင်ရဲ့ တဖက်သတ် လက်နက်အားကိုး အကြမ်းဖက်မှုကို ပြည်သူတွေ ခါးစည်းခံနေကြရာက ၃ ပတ် နီးပါး ကြာမြင့်ပြီးချိန်မှ နိုင်ငံတကာက စစ်ရေးအရ ၀င်ရောက်တားမြစ်ဖို့ ကြိုးစားလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည်အချိန်မှာပဲ ဂျပန်ပြည်မှာ ငလျင်နဲ့ ဆူနာမိလှိုင်း ကပ်ဘေးကြီး ဆိုက်ရောက်တာအပြင် နူကလီယားစက်ရုံ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဓာတ်ရောင်ခြည် ယိုစိမ့်မှုများအတွက် စုိုးရိမ်မှုများလည်း ပြန့်နှံ့လို့ နေပါတယ်။ အဲသည်အရေးအခင်းများအပေါ် မြန်မာပြည်သားများရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု တုန့်ပြန်မှုများ နဲ့ ဆရာရဲ့ အတွေးအမြင်များကို မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆရာရေ … လစ်ဗျားပြည်က အာဏာရှင်ကဒါဖီကို ကုလသမဂ္ဂ၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ အာရပ်အဖွဲ့ချူပ် နဲ့ အမေရိကန်တို့က နိုင်ငံရေးမျက်နှာစာမှာ အားလုံး သဘောတူပါဝင်တဲ့ စစ်ရေးအရ စွက်ဖက်တဲ့ အရေးယူမှု ဆောင်ရွက်လိုက်တယ်။ အဲသည်အချိန်မှာ အခြား ဘာရိမ်းတို့၊ ယီမင်တို့မှာလည်း လူထုအုံကြွမှုတွေ ဖြစ်ပွားနေဆဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါတွေကို ဘယ်လိုမျိူး ပြောချင်သလဲ …
ကျနော်ပြောချင်တာက တခုကတော့ အာဏာရှင်တွေထဲမှာ အနှစ် ၄၀ ကျော် တိုင်းပြည်ကို အုပ်စုိုးနေတဲ့ လစ်ဗျားခေါင်းဆောင် ကဒါဖီ ဖြစ်တဲ့အတွက် အာဏာရှင်တွေထဲမှာ ခေါင်းအမာဆုံး ဖြစ်မှာပဲ။ ဒီလို အရေးယူတာဟာ လွယ်လွယ်နဲ့ သူ့ဖက်က အလျော့ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
နောက်တခုကတော့ အာဏာရှင်တဦးက သူ့ပြည်သူတွေအပေါ်မှာ လူအခွင့်အရေး ချိူးဖောက်မှုတွေ ဘယ်လိုပဲ ကျူးလွန် ကျူးလွန်၊ ကမ္ဘာကကော၊ ကုလသမဂ္ဂက ဘယ်လိုပဲ အရေးယူမယ် ပြောပြော၊ တကယ်တမ်း လက်တွေ့ကျတဲ့ အရေးယူမှုတွေ ဖြစ်လာဖို့ ဆိုတာက အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေ ပထ၀ီဒေသက အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ သဘောတူညီချက် မပါဘဲနဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ အခုအချိန်မှာ လစ်ဗျားကို ရှုတ်ချဖို့၊ အရေးယူဖို့ကို အိမ်နီးချင်း အာရပ်လိဂ်တို့ အာဖရိကနိုင်ငံများတို့က သဘောတူ လက်ခံပေးလို့ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ထောက်ပြချင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာက အရေးယူမှုဆိုတာကလည်း သေချာကြည့်မယ် ဆိုရင် အချိန်အတော်ယူတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အမေရိကန်အနေနဲ့ကလည်း အာရပ်နိုင်ငံ၊ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံအပေါ်မှာ နောက်ထပ် စစ်ပွဲတပွဲ ထပ်ဖြစ်ဖို့အတွက် အရမ်း ချိန်ဆနေရတာ ဖြစ်တယ်။ ဥရောပကလည်း သူ့နယ်မြေတွေဆီကို ရွေ့ပြောင်းလာမယ့် ဒုက္ခသည်တွေ၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး သက်ရောက်မှုတွေကို တွက်ဆနေတာကို တွေ့ရတယ်။ တရုတ်တို့ ရုရှားတို့ကလည်။ အများက တညီတညွတ်တည်း ဖြစ်နေပြီးတော့ လစ်ဗျားအာဏာရှင်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေက အလွန်ကို ဆိုးဝါးလှတဲ့အတွက် သူတို့အနေနဲ့ ကန့်ကွက်မဲ မပေးဘဲ နေခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးဟာ တကယ်တမ်းမှာ သူတို့ နိုင်ငံတွေရဲ့ အကျိူးစီးပွားကို အရင် တွက်ဆ ကာကွယ်ပြိးမှသာ လစ်ဗျားအရေးကို ၀င်ရောက် ကိုင်တွယ်တယ်လို့ ဆိုချင်တယ်။
မြန်မာပြည်အရေးကိစ္စနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး တွေးကြည့်မယ် ဆိုရင် …
မြန်မာပြည်က စစ်အာဏာရှင်တွေကလည်း လစ်ဗျားက အာဏာရှင်တွေလို အလွန် ခေါင်းမာတဲ့ စစ်အုပ်စုတွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့နေရတယ်။ လစ်ဗျားရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိူးဖောက်မှုတွေ ပြည်သူတွေအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုတွေ ကြောင့် နိုင်ငံတကာက မနေနိုင်ဘဲ ၀င်ပြီး အရေးယူကြရတယ် ဆိုရင် မြန်မာပြည်ရဲ့ အခြေအနေဟာ လစ်ဗျားနဲ့ ယှဉ်ရင် သူ့ထက် မနိမ့်တဲ့ အခြေအနေဆိုးဝါးမှုကို ရင်ဆိုင် ဒုက္ခဖြစ်နေတာဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာလှပြီလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ လစ်ဗျားရုဲ့ ပေါက်ကွဲမှုတွေ အကြပ်အတည်းတွေကြောင့် နိုင်ငံတကာက အရေးယူသလို မြန်မာပြည်ရဲ့ အရေးကိုလည်း အရေးမယူနိုင်ကြဘူးလား ဆိုတာက မေးခွန်း ဖြစ်လာတယ်။
အဲသည်မှာ အထက်ကပြောခဲ့သလိုပဲ လစ်ဗျားရဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာ တူနီးရှားတို့၊ အီဂျစ်တို့ စတဲ့ အသာစီးရသွားတဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိနေသလို၊ ရုန်းကန် လှုပ်ရှားနေရတဲ့ ယီမင်တို့ ဘာရိမ်းတို့လို နိုင်ငံတွေ အရေးအခင်းတွေက အများကြီး ရှိနေတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကျတော့ ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေက အရေးအခင်းတွေ ငြိမ်သက်နေပြီး ကျနော်တို့ တနိုင်ငံပဲ နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကလည်း ကျနော်တို့ရဲ့ အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံတွေ ပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အနေအထားနဲ့ ရပ်တည်မှုအနေအထားပေါ်မှာ မူတည်နေသလား၊ ဒါကလည်း စဉ်းစားစရာ မေးခွန်း ဖြစ်တယ်။
ပြီးတော့လည်း တဖက်က ပြန်ကြည့်တော့လည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ အာဏာရှင်အောက်မှာ နေလာခဲ့တဲ့ လစ်ဗျားပြည်သူတွေဟာ ၁ လ ၂ လ အတွင်းမှာ လူထုအုံကြွမှုနဲ့ ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ပြီးတော့ မြို့တွေ ရွာတွေကို သိမ်းပိုက်တာတွေ ဖြစ်လာတယ်။ အာဏာရှင်ကို တိုင်းပြည်ကို စွန့်လွှတ်ဖို့အထိ တောင်းဆိုလာတာတွေ ရှိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာကတော့ အရေးအခင်းတွေ ဖြစ်ပွားလာပြီးလို့ရှိရင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ အနှံ့ကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရတာတွေနဲ့ အဆုံးသတ်ရတာ များတယ်။ ရေရှည် လူထုအုံကြွမှု၊ အာခံမှုတွေ မတွေ့ရလို့လား မသိဘူး။ ဒါဟာလည်း မေးစရာ မေးခွန်း ဖြစ်တယ်။
ဒါတွေကို ကျနော်တုို့ မြန်မာပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်က အဖြေရှာရမယ့် မေးခွန်းတွေ ဖြစ်လာတယ် လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဒါဆုိုရင် နောက်မေးစရာမေးခွန်းက အာရပ်နိုင်ငံမှာ အင်တာနက်တွေ၊ ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာတွေ၊ ဆဲလ်ဖုန်းတွေ တယ်လီဖုန်းတွေ ရှိနေလို့ အဲသည် ကျောထောက်နောက်ခံ ရှိလို့ အကြီးအကျယ် တိုးပွားလာတဲ့ အလုပ်လက်မဲ့ ပညာတတ် လူငယ် လူတန်းစားတွေက အခုလို လူထုအုံကြွမှုနဲ့ အာဏာရှင် တော်လှန်ရေး လုပ်နိုင်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနေကြတော့ မြန်မာပြည်မှာက အဲသည်လို ဆက်သွယ်ရေး စနစ်၊ နည်းပညာနဲ့ လူငယ်လူတန်းစားတွေရဲ့ စိတ်ပါဝင်စားမှုတွေက အာရပ်ကမ္ဘာလောက် မပြန့်နှံ့ဘူးလား၊ မြန်မာစစ်အစုိုးရက သူမတူအောင် ပိတ်ဆို့ တားဆီး ကန့်သတ်ထားနိုင်လို့လား။ ဒါကို ဘယ်လိုပြောမလဲ ဆရာ။
မြန်မာပြည်မှာ လမ်းတိုင်း၊ ရပ်ကွက်တိုင်း၊ ကျေးရွာတိုင်းမှာ အင်တာနက်ဆိုင်တွေ၊ ဖုန်းဆိုင်တွေ အနှံ့ ရှိနေပြီ ဖြစ်တယ်။ လူကြီးတွေ လူငယ်တွေကလည်း ဆက်သွယ်ရေးနည်းစနစ်တွေ သုံးစွဲနေကြပြီ ဖြစ်တယ်။ ဒါကို မြန်မာပြည်မှာ ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့နေရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း စစ်အစုိုးးရက နည်းမျိူးစုံနဲ့ အင်တာနက်တွေ ဆက်သွယ်ရေးတွေကို ပိတ်ဆို့တာ စောင့်ကြည့်တာ အရေးယူတာတွေ လုပ်နေတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်ကပဲ အင်တာနက်ဖုန်း ဆက်သွယ်ရေးတွေကို တားမြစ်မယ် စသည်ဖြင့် ထုတ်ပြန်လာတာကို တွေ့နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော် ပြောနိုင်တာ တခုကတော့ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ ကမ္ဘာ့သတင်းတွေ၊ လစ်ဗျားသတင်းတွေ အရေးအခင်းတွေကို သူတို့တွေ အားလုံးဟာ သိနေတာပဲ။ စောင့်ကြည့်နေကြတယ် ဆိုတာက သေချာတဲ့ အချက်ပါပဲ။ သူတို့တွေ အားလုံးဟာ လစ်ဗျားကို နိုင်ငံတကာက အရေးယူသလိုမျိူး သူတို့တိုင်းပြည်မှာ ဘယ်လိုမျိူ ဖြစ်လာနိုင်သလဲ ဆိုတာကို အဖက်ဖက်က စောင့်ကြည် သုံးသပ် နေကြတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးဟာ လစ်ဗျားကို အရေးယူသလုိုမျိူး မြန်မာပြည်ကို ဘာဖြစ်လို့ ခုချိန်အထိ အရေးမယူနိုင်သေးတာလဲ ဆိုတာကို မေးနေကြမယ်၊ တွေးနေကြမယ် လို့ ကျနော်ကတော့ ထင်မြင်ပါတယ်။
နောက် ဆရာပြောတဲ့အထဲမှာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ ၀င်ရောက် စွက်ဖက်မှုပေါ့လေ။ ဒါကလည်း အရေးကြီးတယ်လို့ ဆိုတယ်။ အာရပ်ကမ္ဘာမှာ အိမ်နီးချင်းတွေကိုယ်တိုင်မှာ အရေးအခင်းတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဘက်လိုက်မှုတွေ၊ ဥပက္ခာပြုမှုတွေ ရှိနေတယ်။ ဒါတွေကလည်း အရေးကြီးတဲ့ အခမ်းကဏ္ဍမှာ ပါနေတယ်။ မြန်မာပြည်အတွက် ဆုိုရင်လည်း ဘယ်အိမ်နီးချင်းရဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၊ စွက်ဖက်မှုကို ခံထားရတယ်လို့ ပြောမလဲ။
အဓိက ထောက်ပြချင်တာ တခုကတော့ လက်ရှိမှာ တရုတ်ပြည်ရဲ့ မြန်မာပြည်အပေါ် သက်ရောက်နေတဲ့ သြဇာနဲ့ သက်ရောက်မှုပေါ့လေ။ တရုတ်အစုိုးရက တလျောက်လုံးမှာ စစ်အစုိုးရဖက်က ရပ်တည်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သိကြတယ်။ နိုင်ငံရေးအရ တရုတ်ပြည်ဟာ စစ်အစုိုးရကို ထောက်ခံမှုပေးနေရုံတင်သာမကတော့ဘူး၊ နောက်ပိုင်းမှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး၊ သယံဇာတတွေ၊ အရင်းအမြစ်တွေအပေါ်မှာ စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ကိုင်လာတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ နေ့စဉ် စားဝတ်နေရေးတွေ လူမှုဘ၀တွေကိုပါ လွှမ်းမိုးမှုတွေ ခံလာရတယ်လို့ ပြောချင်တယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဆိုရင် သယံဇာတတွေ၊ အရင်းအမြစ်တွေ ထုတ်ယူတယ်၊ စွမ်းအင်တွေကို လည်း ယူတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ မြစ်ချောင်း အင်းအိုင် တောတောင် တွေကိုပါ ချယ်လှယ် လုပ်ကိုင်လာတော့ မြန်မာပြည်သူတွေ တိုင်းရင်းသားတွေ ဆိုတာက မြို့ ရွာတွေကအစ နယ်စပ်တွေ ကျေးလက်တွေအထိ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေ ထိခိုက်လာရတယ်။၊ အိုးအိမ်တွေ ရွှေ့ပြောင်းရတာ၊ အလုပ်အကိုင်တွေ ပျောက်ဆုံးကုန်တာတွေ၊ ဆုံးရှုံးရတာတွေ ဖြစ်ပွားလာတယ်။ ဒါကို ဒုက္ခသည်ပြည်သူတွေအတွက် စစ်အစုိုးရက အကာအကွယ် မပေးဘူး။ လူထုဟာ ခါးစည်းခံနေရတယ်။
အဲသည်မှာ လူတွေဟာ တရုတ်အစုိုးရအပေါ်မှာ အကောင်းမြင်မှုတွေ နည်းပါးလာတာကို တွေ့ရတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အမြင်မှာ တရုတ်အစိုးရက မြန်မာစစ်အစုိုးရကို လက်တွဲနေလို့ ကာကွယ်ပေးနေလို့ နိုင်ငံတကာက ကမ္ဘာက ပြည်သူတွေက၊ အစုိုးရတွေက မြန်မာစစ်အစုိုးရကို အရေးယူမှုတွေ ပိတ်ဆို့မှုတွေ လုပ်ဖို့ ခက်နေတယ်။၊ အတားအဆီးကို ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ မြင်လာကြတယ်။
ဒါကို နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ လစ်ဗျားအရေးအခင်းမှာ နိုင်ငံတကာ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုကို စစ်ရေးအရ အရေးယူမှုတွေကို တရုတ်အစုိုးရက လက်ပိုက်ကြည့်နေသော်လည်းပဲ မြန်မာပြည်ကို ကုလက အရေးယူနိုင်ဖို့အရေးမှာ တရုတ်က ဗီတိုလက်နက်ကိုင်ပြီး တလျောက်လုံးမှာ ကန့်ကွက်နေခဲ့တာ ဘာသဘောလဲ၊ တရုတ်ဟာ ဘယ်လိုမျိူ်းလဲလို့ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေကြားမှာ မေးခွန်းတွေက ပိုပြီး ထွက်လာပြီ ဖြစ်တယ် လို့ ပြောချင်တယ်။ ဒါဆိုရင် နောက်ပိုင်းမှာ တရုတ်အစုိုးရကိုယ်တိုင်လည်း မြန်မာပြည်အရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကိုယ်တိုင်လည်း ဆင်ခြင်ရတော့မယ် အနေအထားကို ရောက်လာလိမ့်မယ် လို့ ထင်တယ်။
ဒါဆိုရင် အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေ၊ တပါတီ အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေကကော လစ်ဗျားပြည့်ရှင် ကဒါဖီကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လုို သင်ခန်းစာတွေ ယူကြမယ် ထင်သလဲ ဆရာ။
တရုတ်ပြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူတို့ပါတီညီလာခံမှာ အစုိုးရခေါင်းဆောင်အဆင့်ဆင့်က နိုင်ငံတိုးတက်အောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ရမယ် ဘာညာနဲ့ ထုတ်ပြောတာတွေ ကြားရတယ်။ ရုရှားပြည်ထောင်စုမှာကလည်း လက်ရှိ အာဏာရှင် ပူတင်ကို ရာထူးက ဆင်းပေးဖို့ ဘာညာ စတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲလားတော့ မသိဘူး၊ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကာင်စီမှာ ရုရှားကော၊ တရုတ်ကိုယ်တိုင်ကောက နိုင်ငံတကာက အစုိုးရတွေနဲ့ ထပ်တူ သဘောထား ရှိတယ်လို့ ပြသလာတယ်။
သုို့သော်လည်းပဲ တဖက်က ပြန်ကြည့်ရင်တော့ မြန်မာစစ်အစုိုးရက သူတို့စစ်တပ်ကို နားသွင်းလာနိုင်တာက လစ်ဗျားမှာလိုမျိူး စစ်တပ်က အကွဲကွဲ အပြားပြား မဖြစ်ဘူး။ ငါတို့မှာလည်း မဖြစ်ဘူး။ ဒါမျိူး ပြောလာနိုင်တယ်။ ငါတို့လုပ်ပေးထားတဲ့ လွှတ်တော်တွေ အစုိုးရတွေမှာ လူတွေက ကျေနပ်တယ်၊ သဘောတူတယ်၊ ဒါကြောင့် ငါတို့ကို ဘာမှ ပြန်လှန်ပြီး လှုပ်ရှားတာတွေ မဖြစ်လာဘူး။ ငါတို့ လုပ်တာတွေဟာ တိုင်းပြည်အတွက် ပြည်သူအတွက် မှန်ကန်တယ်လို့ ၀ါဒတွေ ဘာတွေ ဖြန့်လာနိုင်တယ်။ ဒါမျိုး မြန်မာအစုိုးရက တုန့်ပြန်မလား ဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်ရမယ့် မေးခွန်းတခုပေါ့လေ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာ။ အခု လစ်ဗျားတို့ မြန်မာတို့လို နိုင်ငံတွေက အာဏာရှင်တွေနဲ့ သူ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အခြေအနေနဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေကို သုံးသပ်ပြီးတဲ့နောက် သဘာဝဘေးဒဏ်နဲ့ နယူကလီးယားဓာတ်အားပေးရုံ ပျက်စီးမှု အန္တရာယ်ကို ရင်ဆိုင် ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ဂျပန်ပြည်နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆရာက ဘာပြောချင်သလဲ ဆရာ။
ဂျပန်ပြည်က ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အန္တရာယ်က ရေ၊ မြေ၊ လေ၊ မီး ဓာတ်ကြီး လေးပါးစလုံးရဲ့ ဘေးအန္တရာယ်ကို ခံစားနေကြရတယ်။ လူတွေ သောင်းချီပြီး သေကျေတယ်။ လုပ်ငန်းတွေ စီးပွားရေးတွေ အကြီးအကျယ် ထိခုိုက် ပျက်စီးကြရတယ်။ သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဘေးဒုက္ခကြီးဟာ ဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ မြင်တွေ့ နေရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက အစုိုးရတွေ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ပြည်သူတွေ အကုန်လုံးက ရပ်ကြည့်ပြီး မနေဘဲ ၀ုိုင်းဝန်းပြီးတော့ ကူညီရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေး၊ အားပေးထောက်ပံ့ရေးတွေဟာ တိုင်ပင်စရာတောင် မလုိုဘဲ ၀င်ရောက်လာကြတာကို တွေ့နေရတယ်။
အဲသည်မှာ သူတို့ နိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံသားတွေက အလွန်ကြီးမားတဲ့ တိုင်းပြည်ပျက်မတတ်ဖြစ်တဲ့ အရေးအခင်းကြီးကို ဘယ်လို ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်ကြသလဲ ဆိုတာဟာ ကျနော်တို့အတွက် အတုယူစရာ၊ သင်ခန်းစာယူစရာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
သူတို့တတွေဟာ စည်းစည်းလုံးလုံး ညီညီညွတ်ညွတ် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ရင်ဆိုင်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ စည်းကမ်းတကျ ရှိကြတာကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ရတယ်။ အခြားနေရာ ဒေသတွေလို အခြားဒေသတွေက ဘေးဒုက္ခတွေမှာလို လူတွေက ခိုး ဆိုး လုယက်တာတွေ၊ တိုက်ကြ ခိုက်ကြတာတွေ မမြင်ကြရဘူး။ အလွန် ကောင်းမွန်တဲ့ လူထုရဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း လူမျိူးတမျိူးရဲ့ စိတ်ဓာတ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။
င်္ဒီလိုမျိူး သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ တွေ့နေရတာတောင်မှ သူတို့အစုိုးရ ဘာပြောသလဲဆိုတော့ အံ့သြစရာကောင်းတာက မြန်မာပြည်အတွက် ပေးမယ်လို့ ပြောထားတဲ့ လူမှုရေးကူညီမှုတွေကို ကတိပေးထားတဲ့အတုိုင်း ဆက်ပေးသွားမယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တာဟာလည်း အလွန်ကို လေးစားဖွယ်ရာကောင်းတယ်။
ပြီးတော့လည်း အနုမြူဓာတ်ပေါင်းဖို ပေါက်ကွဲ ပျက်စီးနေတာကို ကာကွယ်ဖို့ ကယ်တင်ဖို့ စက်ရုံဝင်းထဲမှာ အသက်စွန့်ပြီး၊ ကိုယ်ကျိူးစွန့်ပြီး သွားရောက်အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေ နိုင်ငံသားတွေဟာလည်း အလွန်ကို လေးစားဖွယ်ရာ၊ ချီးကျူး ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာဖြစ်တယ်။
ဒါတွေဟာ ကျနော်တုို့တွေ အများကြီး နမူနာယူရမယ်၊ အတုယူရမယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကမ္ဘာကြီးမှာ မော်ကွန်းတင်ကျန်ရစ်မယ် လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ အဲသည်မှာ ဂျပန်ပြည်တပြည်လုံးမှာ ရှိနေတဲ့ လူတွေ အားလုံးကို အစုိုးရတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေက ကူညီ စောင့်ရှောက်မှုတွေ ကယ်ဆယ်ရေးတွေ လုပ်နေကြတယ်၊ အဲသည်မှာ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်က ရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အကြောင်းကိုလည်း ကျနော် ပြောချင်ပါတယ်။
ဂျပန်ပြည်မှာ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ၂ သောင်း ကျော်လောက် ရှိတယ် လို့ ကြားသိရပါတယ်။ ဂျပန်ပြည်မှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ကူညီမှုတွေ၊ စောင့်ရှောက်မှုတွေ လုပ်ဖို့ကတော့ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြား သံရုံးတွေရဲ့ အခမ်းကဏ္ဍကလည်း အရေးပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ တရုတ်သံရုံးကိုယ်တိုင်က သူတုို့နိုင်ငံသားတွေကို စောင့်ရှောက်ဖို့ ကူညီဖို့ လုပ်ပေးနေတယ်လို့ တွေ့နေရချိန်မှာ ဂျပန်ပြည်က မြန်မာသံရုံးက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ကူညီ စောင့်ရှောက်ဖို့ သတင်းပြန်ကြားပေးဖို့ ဘာမှ လုပ်ပေးတယ်လို့ ကျနော်တို့ ကြားသိရခြင်း မရှိပါဘူး။ ဘယ်လုို မြန်မာလူမျိူးပဲ ဖြစ်ဖြစ် မြန်မာသံရုံးက စောင့်ရှောက်ပေးသင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဘယ်လိုမျိူး ကူညီမှု စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ပေးရမလဲလို့ ကျနော်တို့ က တွေးနေရပါတယ်။ ကျနော်တုို့ ကြားမိသလောက်ကတော့ မြန်မာအမျိူသားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး အချင်းချင်း အသိပေးပြန်ကြားပြီး အားပေးကူညီမှုတွေ လုပ်နေကြတယ် ကြားလို့လည်း ၀မ်းသာမိပါတယ် လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
နောက်တချက်ပြောချင်တာကတော့ ဂျပန်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား အချင်းချင်းတွေရဲ့ နားလည်မှုနဲ့ဆက်ဆံရေးပါ။ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကြားမှာ အမြဲတမ်း ချစ်ခင်မှု ရင်းနှီးမှုတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာတောင် မြန်မာတွေဟာ ဖက်ဆစ်စနစ်ကို တော်လှန်ခဲ့ပေမယ့် စစ်ရှုံးတဲ့ ဂျပန်စစ်သားတွေကို ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံတာ၊ စောင့်ရှောက်တာတွေ လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုအချိန်မှာလည်း ကျနော်တို့တွေကလည်း ကျနော်တို့ တတ်နိုင်တဲ့ နည်းနဲ့ မေတ္တာ၊ စေတနာ တွေနဲ့ ရှိတဲ့ ကူညီ အားပေးမှုတွေ လုပ်ကိုင်ကြဖို့ ဆောင်ရွက်နေကြတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ချုပ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအစ ပါတီဝင်တွေကိုယ်တိုင်လည်း အားပေးကူညီမှုတွေ လုပ်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်။ ကဗျာဆရာတွေကလည်း ကဗျာစာအုပ်ထုတ်တာ၊ ရန်ပုံငွေ လှုပ်ရှားမှု လုပ်တာတွေ တတ်စွမ်းသလောက် လုပ်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလည်း ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ သူမျိူး၊ မိတ်ဆွေကောင်း မိတ်ဆွေစစ်အဖြစ် ရပ်တည်တဲ့ လူမျိူးအဖြစ် ရပ်တည် ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အကြောင်းကိုလည်း ပြောချင်ပါတယ်။
တာလီဘန် ပြဿနာသည် လူထုအုံကြွမှု ပေါ်ပေါက်လျှင် ကဒါဖီ စတိုင်ဖမ်းရန် ဦးသန်းရွှေဇာတ်ပျိုးထားခြင်းသာဖြစ်
FNG ပြီးခဲ့သည့် သီတင်း ပတ် အတွင်း ရခိုင်ပြည် နယ် နှင့် ဘင်္ဂလား ဒေရှ် နယ်စပ် ဉ် တာလီဘန်ဟု
ယီမင် စစ်တပ်အကြီးအကဲအချို့ ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ ပူးပေါင်း
ယီမင်နိုင်ငံမှာ ပြဿနာတွေ ပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ သမ္မတ အလီ အဗ္ဗဒူလာ ဆာလေး (Ali Abdullah Saleh) အပေါ် ထောက်ခံမှုတွေ သိသိသာသာ ကျဆင်းနေချိန်မှာပဲ အကြီးတန်း စစ်ခေါင်းဆောင် အများစုဟာလည်း သမ္မတ ဆာလေး အာဏာက ဖယ်ရှားရေး တောင်းဆို ဆန္ဒပြနေကြသူတွေနဲ့အတူ ပူးပေါင်းလိုက်ကြပါတယ်။
ယီမင်နိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်း စစ်ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်တဲ့ မစ္စတာ ဆာလေးနဲ့ အချိန်အတော်ကြာ အလုပ်လုပ်ခဲ့သူ ဗိုလ်ချုပ် အလီ မိုဆန် အယ်လ်-အာမာ (Ali Mohsen Al-Ahmar) က ငြိမ်းချမ်းတဲ့ လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေကို သူ ထောက်ခံကြောင်း တနင်္လာနေ့က ကြေညာခဲ့သလို ဆန္ဒပြသူတွေအပေါ် နှိမ်နင်းမှုတွေကို ပြစ်တင် ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံရဲ့ အရေးပါဆုံး လူမျိုးစုခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်တဲ့ ရှိတ်ခ် ဆာဒက် အယ်လ်-အာမာ (Sheik Sadeq al-Ahmar) ကလည်း ဆန္ဒပြပွဲတွေကို ထောက်ခံတဲ့အကြောင်း တနင်္လာနေ့က ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ကျရောက်တဲ့ ကမ္ဘာ့သောက်သုံးရေနေ့မှာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး လှုပ်ရှားသူတွေက မြန်မာနိုင်ငံက နေရာတော်တော်များများမှာ သောက်သုံးရေ ရှားပါးမှုကြောင့် မသန့်ရှင်းတဲ့ရေကို အသုံးပြုနေကြရတဲ့သူတွေ အများအပြား ရှိနေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ ထောက်ပြကြပါတယ်။ ဒီလို ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် မြစ်ရေခန်းခြောက်မှု ပြဿနာကိုလည်း အစိုးရက အချိန်မီ ထိန်းသိမ်းပေးဖို့ကိုလည်း တိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မသင်းသီရိက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ သောက်သုံးရေ ရှားပါးမှု ပြဿနာ၊ ရေမသန့်ရှင်းတဲ့ ပြဿနာတွေအပြင် မြစ်ရေခန်းခြောက်မှု ပြဿနာတွေ အတော်လေး ကြုံနေရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒီကနေ့ ကျရောက်တဲ့ ကမ္ဘာ့ရေနေ့မှာ မှတ်ချက်ပေးရမှာပါ။
NLD အခမဲ့ ဆေးခန်းဖွင့်
သဲသဲ | အင်္ဂါနေ့၊ မတ်လ ၂၂ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၀ နာရီ ၅၆ မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ရန်ကုန်တိုင်း ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) ရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကို အခမဲ့ ဆေးကုပေးရန်အတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD က တနင်္လာနေ့တွင် ဆေးခန်းတခု ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။
ကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးကုခန်းကို တောင်ဒဂုံ ၇ဝ ရပ်ကွက်ရှိ ဦးသိန်းစိုး နေအိမ်၌ တနင်္လာနေ့တိုင်း မနက် ၉ နာရီမှ နေ့လည် ၁၂ နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်မှာ ဖြစ်သည်။
“ဒီလူတွေအတွက် တရက်ဆိုတရက် သိသာတော့ ဆေးခန်းကို ရှိတဲ့ငွေနဲ့ အမြန်ဖွင့်လိုက်တာ။ ကုတင်ရယ်လို့တောင် မရှိသေးပါဘူး။ ကြမ်းပြင်မှာ စောင်ခင်းပြီးတော့ လောလောဆယ် ကုပေးနေတာ” ဟု ဒဂုံမြို့နယ် NLD တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ကိုညီညီက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့တွင် လူနာ ၄ဝ ကျော် လာရောက်ကုသမှု ခံယူခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
လူနာများကို Blood Give (BG) သွေးအကူအညီပေးရေး အဖွဲ့ကလည်း အဝတ်အစားနှင့် ဆန်နုိ့ဆီဘူး ၂ လုံးစီ ဝေငှပေးခဲ့သေးသည်။ BG မှာ NLD ပါတီဝင်နှင့် ပါတီဝင်မဟုတ်သည့် လူငယ်များ စုဖွဲ့ထားပြီး၊ အရေးပေါ် သွေးလှူဒါန်းကာ လူမှုကူညီရေးများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။
လိုအပ်သည့် ဆေးဝါးနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် NLD အဖွဲ့ဝင်များ၏ လှူဒါန်းငွေဖြင့် မတည်ခဲ့ကာ၊ ရေရှည်အတွက် အလှည့်ကျ ကုသပေးနိုင်မည့် ဆရာဝန်၊ အကူဝန်ထမ်းများနှင့် ဆေးဝါးဝယ်ယူရန် ရန်ပုံငွေ မရှိသေးကြောင်း ကိုညီညီက ပြောသည်။
“လောလောဆယ် ဘာရန်ပုံငွေမှကို မရှိတာ။ အခုဖွင့်တာလည်း ကျနော်တို့ မြို့နယ်(စည်း)က ရှိတဲ့ငွေတွေ နည်းနည်းစီ စုပြီး လုပ်ထားပါ။ ဆေးခန်းနာမည်လည်း မရှိသေးပါဘူး” ဟု သူက ဆိုသည်။
တောင်ဒဂုံ ၆၉ ရပ်ကွက်တွင် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့၌ လေပြင်းကျရောက်သဖြင့် အိမ်ခြေ ၁၅ဝ ခန့် ပျက်စီးခဲ့ရာ၊ အခင်းဖြစ်ရာသို့ NLD ပါတီဝင်များက သွားရောက်၍ ဆေးကုသပေးခဲ့ကြသေးသည်။
၎င်းတို့ဆေးခန်းတွင် မကုသနိုင်သည့် လူနာများကိုမူ သက်ဆိုင်ရာ ဆေးရုံများ၌ သွားရောက်ကုသနိုင်ရန် အလုပ်ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီက စီစဉ်ပေးသွားမည်။ ကော်မတီကို ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ဒဂုံမြို့နယ် စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝင် ၇ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ပြီးဆုံးခဲ့သည့် NLD ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေး၌ ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ အရှိန်မြင့်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက် အခမဲ့ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ဂီရီမုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံမြို့နယ်ရှိ ကျီးခေါင်းတောင်စေတီ ထီးတော်အား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အများပြည်သူက လှူဒါန်းကြောင်း ကမ္ဗည်းထိုးကာ မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်ခဲ့သည့် တပေါင်းလပြည့်နေ့တွင် လှူဒါန်းခဲ့သေးသည်။
စစ်သား တွေ ကို အောက် ထစ် ၊ လစာ နှုန်း ၁ သိန်း ခွဲ ...
လစ်ဗျား၊ မြန်မာနဲ့ ဂျပန်ပြည်က နိုင်ငံသားများ ဘာတေ...
သေနတ်ကို အမိန့်ပေးနိုင်ရင် အစိုးရဖြစ်တဲ့ခေတ်
ဖိနပ်စက်ရုံ အလုပ်သမားများ ဆန္ဒပြ